MADAGASIKARA MALALAKO: Hafatra maika: Hafatra ho an'ny mpiara-mitolona
Hafatra maika: Hafatra ho an'ny mpiara-mitolona
Voizina hatramin'ny omaly 17/11/10 ka mandarak'androany amin'ny haino aman-jerin'ny mpomba ny FAT ny fanaratsiana ny zavatra ataon'ireo manam-boninahitra eny IVATO, ataon'ny fahavaloavokoa rahefa mety tetika rehetra entina hanasoketana , hanakiviana , hanakorotan-tsaina ihany koa an'ireo izay mpomba ny fandavoana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao.Hita koa izany tetiky ny fahavalo izany any amin'ny site moov, sobika , topmada , eny hatramin'ny SITE ny TIM koa aza.
Tonga hatramin'ny filazana mihintsy aza hoe:criminel ireo eny Ivato ireo. Ao koa ny filazana hoe alliance contre nature io, sns...
Izany rehetra izany no nataon'ny mpomba ny FAT dia satria tsy nampoiziny io zava-nitranga io;hita fa misy tahotra goavana ao.
Ho antsika tsy mpanaraka izao fitondrana FAT izao dia tsotra no ataovy ao an-tsaina :
Aza mora kivy
Aza miroaroa saina na marivo salosana,
Aza manaratsy tena ka lasa agent ny FAT" inconsciement".Plus ianao misalasala , plus miha- matanjaka ny FAT.
Aza be fanontaniana na be resaka fa lasa mampalemy ny "conviction " izany, sns...
Tsy sangy na cinema ny mitranga eny Ivato io fa tena izy. Tsy ny ady izay nisy teo amin'ireo miaraka manao fanambarana omaly no zava-dehibe fa ny fahavitan'ny fifamelana teo amin'izy ireo ka miara-miaiky fa simba ny firenena ka ndao haremina haingana ka nahatonga azy ireo nanao iny fanambarana iny.Izy ireo izay nifanenjika , nifamono, nifanaratsy , nifanagatra omaly no nahavita ny "réconciliation voalohany.
Koa maninona isika no sarotiny alohan'ny tompony ??? Izy saika hifamono omaly aza nahay nifamela koa ianao na izaho na isika indray no sarotiny!
Ny maika dia ny tokony hihetsehan-tsika maika fa izay no fanampiana goavana an'ireo havana eny Ivato hampanjary ny fanalana ny FAT haingana dia haingana.Ny vavantsika lasa lavitra fa tsy arahina asa @ firotsahana an-dalam-be akory .
Ekena fa mety hisy ho voasambotra, haratra , rava fananana, higatra eo, saingy raha hanala an'io tsy maintsy risque .
Anjaran'ny tsirairay no manapa-kevitra.Fantatr'ireo FAT tsara fa raha miongana eo izy ireo dia zava-doza no hiandry azy , dikan'izany dia hiady mafy koa izy ny hijanona eo.Haintsika tsara fa discilple an-dry satana sy ny devoly ireo.
Anjarantsika ny mandrindra ny tetika isan-tanàna fa tsy voatery ho eny Ambohijatovo daholo @ voalohany na Analakely saingy miara-mihetsika isan-tanàna kosa ny rehetra .Voazara ny herin'ny foloamlindahy izay mpomba azy amin'izay.
Hatrehina koa ireo Foza isan-tanàna fa fantatsinka ireny olona ireny isam-pokontany.
Manahy aho fa raha tsy mihetsika haingana dia haingana isika dia ho resy sy ho voasambotra toa ny teny @ FIGN ireo havantsika sahy manao ny sorona ny ainy eny Ivato ireo ary handamoka sy ho lasa rano indray ny fanantenana.
Raha maro ny olona mihetsika , minoa ny lazaiko ianao fa ho maro ny foloalindahy no handà baiko , sahy hiseho amin'izay.Io ilay tavan-drahalahy mandranitra tavan-drahalahy.Isika aloha no aoka sahy hijoro ho tompony fa hanampy anao izao rehetra izao.
Tsy Ny Jeneraly Raolelina sy ny foloalindahy légaliste no hamitaka anao na koa ka hoe vendrana tsy hahay handrefy ny zavatra hataony sy ireo maro hafa miaraka ao ireo.